Ciidanka difaaca Puntland oo ka qaybqaadanaya gurmadka abaaraha. – Radio Daljir
Ciidanka difaaca Puntland oo ka qaybqaadanaya gurmadka abaaraha.
Nofeembar 24, 2016 9:16 g 0
Garoowe, Nov 25 2016–Dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqay inay ciidamadeeda qalabka sida u diyaar garoobayaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen gurmadka dadka ku tabaalaysan abaaraha ka jira deegaanada Puntland oo gaaray heerkii ugu xumaa.
Warkaan lagu sheegay war murtiyeedka kasoo baxay shirka gollaha wasiirada ee dowladda Puntland oo khamiis walba ay madaxtooyada ku yeeshaan, shirkaas oo uu ka qeyb galay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa Camey.
Gudiga doorashada dadban oo warbixin kasoo saaray doorashada aqalka hoose.